पारिवारिक बिदा सुनेको
कति परिवारका संघर्षहरू उत्पन्न हुन्छन् किनकी एक जना विवाहितले दोस्रो देखि कम्प्ले को दोस्रो भाग जित्न खोज्दा पर्याप्त सुत्न पाउँदैनन्। यदि कंबल को रात टग विजेता चतुर्भुज को कारण हो, यो एक परिवार को बिस्तर को लिनन सेट को बारे मा सोचने को लागि समझ मा आधारित हुन्छ, पनि "डुनेट" भनिन्छ।
पारिवारिक छातीको लुगामा के समावेश छ?
पहिलो, चल्नुको कारण किन परिवारको छातीको नाम यसको नाम हो। परम्परागत रूपमा, यो बेडको लागि "लुगा" को सेटको नाम हो, जसमा दुई तकिएस (केहि सेटहरू, चार), एक पाना र होइन, तर दुई कम्पासहरू समावेश गर्दछ। यस प्रकार, यस्तो सेट को उपयोग एक संयुक्त मञ्जुली नींद को अर्थ हो, तर विभिन्न कम्पास को तहत। त्यो, तपाईं सहमत हुनुहुनेछ, यो धेरै सजिलो छ - हरेक पतिले सुन्तलाको लागि एक आरामदायक तापमान को स्तर समायोजन गर्ने अवसर छ।
पारिवारिक बिस्तारको आकार
प्राय: प्राय: परिवार किट निम्न मानक अनुसार सिंक हुन्छ:
तकियासिस - 70x70 सेमी;
डुवेट कवर - 145x220 सेमी;
पाना - 220x240 सेमी।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, डुवेटको आकारमा लिङ्ग लिनेको परिवारको सेटमा आकारको आकार एक-एक-अर्ध कम्पासको प्रयोग गर्दछ, र पाना सजिलैसँग एक चौडा डबल बेडको रूपमा लिन्छ ।
क्याकोको बाट बिदा सुनेको परिवार
पारिवारिक (र कुनै अन्य) बेडको लागि स्टोरमा जाँदै, यो सम्झना गर्नुपर्छ कि यसको लागि सबैभन्दा राम्रो सामग्री 100% कपास हो। यदि लक्ष्य एक सुन्दर, टिकाऊ र अत्यन्त महँगो पारिवारिक बिस्तारको लुगा खरिद गर्नु हो भने, यो क्यालोको बेड को चयन गर्न अर्थ लगाउँदछ। यो सामग्री पारंपरिक रूप देखि छाती को कपडा सिलाई को लागि प्रयोग गरिन्छ, किनकी यसले उपस्थिति को बिना धेरै (लगभग 300) धुलाई धोने मा सक्षम छ। यसबाहेक, क्यालोको एलर्जी मानिसहरूमा अनावश्यक प्रतिक्रियाहरू नहुदैन र शरीरमा सासुको अनुमति दिन्छ।
पनरोक ग्रेस कवर
निचोड र बाल्टी संग Mop
TV को लागि प्राप्तकर्ता
कटलरीको लागि सुखाने
फूलहरूको लागि उच्च तह खडा
हेटर कसरी छनौट गर्नुहुन्छ?
एलईडी स्ट्रीट ग्याँसहरू "बिक्रोम"
माइक्रोवेव ओवनको लागि पर्खाल कोष्ठक
ध्वनिकहरूको लागि कोष्ठक
बाहिरी कपडा सुखाने
शराबको लागि प्रशीतन - जब मैले छान्नुमा मैले ध्यान दिनुपर्छ?
अगस्ट2इलिन डे - संकेत
अवधि कसरी गति गर्ने?
कसरी एक पर्वमोन छनौट गर्ने?
एक अद्वितीय वसा जलने सूप मा मेयो क्लिनिक को आहार
इन्टरनेट सजावटको लागि टाइल अन्तर्गत टाइल
प्रिन्स चार्ल्सले आफ्नो पितासँग गलत सम्वन्धको कारण डिएन स्पेंसरलाई विवाह गरे
जब नस्टर्टियमको बीउ सङ्कलन गर्ने?
शरीरमा पानी अवधारण
गर्दन स्कार्फ सबै भन्दा फैशनेबल सहायक उपकरण हो
डाम्टातीस: प्रजातिको विवरण
बच्चाहरु मा ल्यूकिमिया: लक्षणहरू
कर्पोरेट शैली शैली
हाम्रो स्थानमा 22 स्थानहरू, जहाँ विकिरण बन्द हुन्छ
वजन घटानेका लागि अनारको रस
क्षैतिज गस्ट्रिस्टिसका साथ आहार
30 अद्भुत स्थानहरू भ्रमण गर्न
पर्यटक ग्यास स्टोव